Sen. Mahdi Daahir oo sheegay in uu dalku wajahayo kacdoon siyaasi ah oo u gudbay shacabka – Kalfadhi
Sen. Mahdi Daahir oo sheegay in uu dalku wajahayo kacdoon siyaasi ah oo u gudbay shacabka
April 25, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Sen. Mahdi Daahir Sheikh Nuur oo ka mid ah mid ah guddiga xeer-hoosaadka iyo shuruucda ee Aqalka sare oo ka hadla shir jaraa’id oo ay maanta Garowe ku qabteen xubnaha aqalka sare ee Puntland laga soo doorto ayaa walaac ka muujiyay xaaladda dalka.
Wuxuu sheegay inuu dowladda federaalka ah soo foodsaaray khakhal siyaasi ah iyo khalkhal amni ah. Sen. Mahdi wuxuu xusay in amniga iyo dhaqaaluhuna waa wada socdaan.
Sen. Mahdi wuxuu sheegay inuu jiro kacdoon siyaasi ah kaas oo ka gudbay siyaasiyiinta dhexdooda isla markaasna lugta la galay shacabkii degganaa maagaalada Muqdisho. “Horta illaah waxaan ka baryaynaa Xamar mar bay burburtay in aanay mar labaad inaga burburin” ayuu yiri Sen. Mahdi
Wuxuu Senetarku ka mid ahaa xubno ka tirsan aqalka sare oo laga soo doorto Puntland, kuwaas oo galabta yimi Garowe isla markaasna sheegay in ay xukuumadda iyo golaha wakiillada Puntland la tashi kala yeelan doonaan xaaladda dalka oo ay qaarkood ka muujiyeen walaac xoog leh.
Sen. Mahdi ayaa u jeediyay dadka Puntland in looga baahan yahay in ay keenaan xal waafi ah oo looga gudbi karo kala guurka. Wuxuu sheegay in Puntland uu saaran yahay culayska la xiriira arrintaas.
Xildhibaanada Aqalka sare ee metela Puntland oo Garowe u tegay la tashi ay la yeelanayaan xukuumadda iyo wakiillada
Sen. Farole oo dowladda federaalka ku eedeyay habaca geedi-socodka dastuurka, federaalaynta iyo faragelinta dowlad-goboleedyada
July 29, 2021 July 29, 2021 Hassan Istiila
Maamulka Jubbaland ayaa maanta soo gaba-gabeeyay wajiga koowaad ee doorashadda xildhibaannada Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya,...
Xildhibaankii ugu horreeyay ee Aqalka Sare oo maanta lagu doortay Kismaayo
Magaalada Kismaayo ayaa maanta lagu doortay xildhibaankii ugu horreeyay ee Aqalka Sare ee baarlamaanka 11-aad ee...
Xildhibaanno guddoomiye Abdi Xaashi iyo 7 xildhibaan ku eedeyay carqaladeynta hannaanka doorashada Gobollada Waqyooyi
July 29, 2021 Hassan Istiila
40 xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, isla markaanna kasoo jeeda Gobollada Waqooyi oo...
Xildhibaannada baarlamaanka Jubbaland oo maanta dooranaya xildhibaannada Aqalka Sare ee dalka
Xafiiska Qaramada Midoobe ee UNSOM oo qalabka doorashada ku wareejiyay guddiga doorashada Koonfur Galbeed